हप्ताको दिन द्वारा सामाजिक अपडेट अनुसूची को लागी एक्सेल फार्मूला | Martech Zone
हप्ताको दिन सामाजिक अपडेटको तालिकाका लागि एक्सेल फार्मूला
सोमबार, नोभेम्बर 2, 2020 सोमबार, नोभेम्बर 2, 2020 Douglas Karr
ग्राहकहरू मध्ये एक जुन हामीले काम गर्छौं तिनीहरूको व्यवसायको लागि एक उचित सुसंगतता छ। यसको कारणले गर्दा, हामी सोशल मिडिया अपडेटहरू समय भन्दा धेरै समय तालिकामा राख्न चाहन्छौं ताकि उनीहरूलाई ती निश्चित मितिहरू र समयहरूमा हिर्काउन चिन्ता पर्दैन।
धेरै सामाजिक मिडिया प्रकाशन प्लेटफार्महरु तपाईको सामाजिक मिडिया क्यालेन्डर को समय तालिका को लागी बल्क अपलोड क्षमता प्रदान गर्दछ। पछि Agorapulse को प्रायोजक हो Martech Zone, म तिमीलाई उनीहरूको प्रक्रियाबाट पार गर्नेछु। एक अवलोकनको रूपमा, उनीहरूले तपाईंको अल्पविराम विभाजित मान (CSV) फाइल अपलोड गर्दा थोरै लचिलोपन पनि प्रस्ताव गर्दछन् किनकि तपाईं वास्तवमै हार्ड फाइलको भन्दा तपाईंको फाईलको स्तम्भहरू नक्शा गर्न सक्नुहुनेछ।
जब हामी CSV फाईल निर्माण गर्दछौं, हामी हप्ताको days दिन ठीक उही समयमा एउटा ट्वीट स्ल्याम गर्न चाहँदैनौं। हामी CSV लाई सेट गर्न चाहन्छौं विशिष्ट हप्ताका दिनहरू र केहि र्यान्डम समयहरू प्रत्येक बिहान। यस उदाहरणमा, म सोमबार, बुधवार, र शुक्रवार बिहानको लागि सोशल मिडिया अपडेटको साथ स्प्रिडशिट भर्न जाँदैछु।
हप्ताको दिन गणना गर्नको लागि एक्सेल सूत्रहरू
निश्चित गर्नुहोस् एक्सेल स्प्रिडशिटबाट सुरू गर्नुहोस्, एक CSV फाईल होईन, किनकि हामी प्रयोग गर्न लागेका छौं एक्सेल सूत्रहरू र त्यसपछि फाईललाई CSV ढाँचामा निर्यात गर्नुहोस्। मेरो स्तम्भहरू धेरै सरल छन्: मिति, पाठ, र URL। कक्ष A2 मा, मेरो सूत्र आज पछिको पहिलो सोमबार फेला पार्नु हो। म पनि बिहान 8 बजेसम्म समय सेट गर्ने छु।
यो सूत्र अर्को हप्ता उफ्रन्छ र त्यसपछि हप्तामा सोमबार फेला पार्छ। सेल A3 मा, मैले २ दिन थप्न आवश्यक A2 मा बुधवारको लागि मिति प्राप्त गर्न दिन:
अब, सेल A4 मा, म days दिन थप्न जाँदैछु ताकि म शुक्रवारको लागि मिति पाउँ:
हामीले अहिलेसम्म गरिसकेका छैनौं। एक्सेलमा, हामी स्वचालित रूपमा पछिल्लो प r्क्तिहरूमा सूत्रहरू गणना गर्न एक्सेलका लागि सेलहरूको श्रृंखला ड्र्याग गर्न सक्छौं। हाम्रो अर्को r पows्क्तिहरू केवल माथिको हाम्रो गणना गरिएको क्षेत्रहरूमा हप्ता थप्न जाँदैछन्। A3, A5, A6, A7, A8, र A9 क्रमश:
अब, तपाई आयात गर्न चाहानु भएको जस्तो धेरै अपडेटको लागि सूत्र तान्नुहोस्।
एक्सेलमा रान्डम टाइम्स
अब हामीसँग हाम्रो सबै मितिहरू मिलाइएको छ, हामी ठ्याक्कै समयमा प्रकाशित गर्न चाहँदैनौं। त्यसोभए, म स्तम्भ A को पछाडि स्तम्भ घुसाउन गइरहेको छु र त्यसपछि स्तम्भ बीमा, म स्तम्भ A मा समयमा घर र मिनेटको अनियमित संख्या थप्न जाँदैछु, तर मध्यान्न जानु हुँदैन।
अब मात्र B2 बाट सूत्र तल तान्नुहोस्:
त्यहाँ हामी जान्छौं! अब हामी सोमबार, बुधवार, र शुक्रवार दिनहरुको स्तम्भ मिल्यौं बिहान 8 देखि दिउँसो बीच अनियमित समय संग। निश्चित गर्नुहोस् अब तपाइँको एक्सेल स्प्रेडशिट (AS Excel) बचत गर्नुहोस्। हामी अर्को स्प्रेडशिटमा प्रत्येक क्वार्टरमा वा प्रत्येक वर्ष फिर्ता आउन चाहान्छौं किनकि हामी अर्को सामाजिक अपडेटहरू अनुसूची गर्छौं।
एक्सेलमा मानहरू प्रतिलिपि गर्दै
चयन गर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्> प्रतिलिपि गर्नुहोस् तपाईंको एक्सेल मेनूबाट र नयाँ एक्सेल वर्कशिट खोल्नुहोस् - यो वर्कशिट जुन हामी CSV मा निर्यात गर्छौं। यद्यपि स्तम्भ टाँस्नुहोस्। यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने, सूत्रहरू टाँस्नेछ वास्तविक मानहरू होइन। नयाँ वर्कशिटमा, चयन गर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्> विशेष टाँस्नुहोस्:
यसले एक संवाद विन्डो प्रदान गर्दछ जहाँ तपाइँ मानहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ:
के यो एक दशमलव संग संख्या टाँस्यो? चिन्ता नगरिकन - तपाईले केवल स्तम्भलाई मिति र समयको रूपमा ढाँचा गर्नुपर्नेछ।
र अब तपाईंले आवश्यक डाटा पाउनुभयो! तपाईं अब सामाजिक अपडेटहरू पप्ट गर्न सक्नुहुन्छ र लिंकहरू थप्न सक्नुहुन्छ। नेभिगेट गर्नुहोस् फाइल> को रूपमा बचत गर्नुहोस् र चयन गर्नुहोस् अल्पविराम विभाजित मानहरू (.csv) जस्तो तपाईको फाइल स्वरूप। त्यो हुनेछ थोक अपलोड फाईल जुन तपाईं आफ्नो सामाजिक मिडिया प्रकाशन प्रणालीमा आयात गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ Agorapulse, अब तपाईं आफ्नो बल्क अपलोड सुविधा को उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ अपलोड गर्न र तपाईंको सामाजिक अपडेटहरू अनुसूचित गर्न
Agorapulse मा कसरी सामाजिक अपडेट अपलोड गर्नुहोस्
प्रकटीकरण: म एक हुँ Agorapulse राजदूत।
टैग: agorapulseथोक अपलोडएक्सेलएक्सेल गणना दिनएक्सेल सूत्रहरूअनियमित समय एक्सेलतालिका तालिका बनाउँदै
एलिसन भेर हलेन
नोभेम्बर २०, २००। 15::2020 अपराह्न
महान सुझावहरूको लागि धन्यवाद! त्यहाँ बाहिर सबै शेड्यूलिंग उपकरणहरू छन्, मैले एक्सेल प्रयोग मात्र सोचेको छैन।